I-iPhone 4S inesithethi esingcono kune-iPhone 4 | IPhone iindaba
I-iPhone 4S inesithethi esingcono kune-iPhone 4
UGonzalo R. | | Ezahlukeneyo
Kule thelekisa abayenzileyo kwiDownloadblog siyabona ukuba i-iPhone 4S ayinayo kuphela iprosesa engaphezulu kunye nekhamera ye-8MP, ngaphandle kwe-eriyali entsha kunye ne-3G chip Apple ephucule isithethi, ngoku ikhupha isandi esinamandla ngakumbi kune-iPhone 4.
Uyabona kwividiyo ukuba iphinda ivelise isandi esifanayo kuzo zombini izixhobo, kumgama ofanayo ukusuka kwimakrofoni kwaye I-iPhone 4S ivakala kakhulu ngakumbi kune-4. Ngokukodwa i-6dB ngaphezulu. Eyona nto inokwenzeka, nguSiri owenza olu phuculo luyimfuneko.
Ekugqibeleni yonke into iya kwahluka kwi-iPhone 4, ngaphandle kwembonakalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-iPhone 4S inesithethi esingcono kune-iPhone 4
Izimvo ezi-9, shiya ezakho
Inyani yile yokuba isithethi se-iPhone 4 sibuthathaka.
Ndihlala nezimvo zokugqibela, yonke into yahlukile ngaphandle kwembonakalo .. Awuswele sizathu.
Amandla ayancomeka kodwa ngaba ucinga ukuba umthamo omninzi uyimfuneko, ukuba ekugqibeleni unawo kwinqanaba le-decibel unokuqhekeka? Ndishiyeke ne-iPhone 4, kubonakala ngathi ayothusi.
Ingxaki kukuba inesithethi esinye ...
Ndixolele ukungazi kwam, kodwa umntu ebenokundixelela. Zingaphi izithethi ezinazo ii-iPhone 4 emazantsi? Xa kuthelekiswa ne-iphone 4
Isikhwama sekhokho sitsho
Ukuphendula okuthunyelwe ngasentla, kunesithethi esi-1, ngokufanayo no-4, ngokwe-ifixit.
Kule vidiyo kunokwenzeka ukwenza umgibe, andazi ukuba iyakuba njalo okanye isizathu sokuba babe nayo, kodwa ndiza kukuxelela ukuba isenokuba ngumgibe lowo.
Ukuba ujonga, kwividiyo xa iphone 4 emnyama iboniswa, awunakubona ukuba isebenze ngeBluetooth, kwaye iphone 4S emhlophe iyayenza. Ewe, baye bakwazi ukusebenzisa ezinye izithethi zebluetooht ukwandisa eso sandi, nangona ikhamera ingasibonisi, inokwenziwa kwaye enyanisweni ndizamile nge-iphone 4 yam.
Ke le vidiyo ayiqinisekiswanga.
Ukuba wenza amabali, kulungile hahaha, kuba kuya kufuneka ukhumbuze wonke umntu ukuba u-Apple utyikitye umntu kwinxalenye yesandi ukuba andilikhumbuli igama kodwa wayengumqambi wento endingayikhumbuliyo either .
Mauro goya sitsho
Ukuba kukho nabani na oye waqaphela, kwi-iOS 5, ivolumu ye-iPhone 4 iyancipha kakhulu.
Phendula uMauro Goya
Ndine-iPhone 4 kwaye ndicinga ukuba ayifuni kuba namandla angaphezulu ukuze ibe iselfowuni. Yiza ezo zandi zilungile.
Ingxaki iyonke kukuba intombi yam iyithathile i-iPhone 4S kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo, kunye ne-IOS 5.11, kwaye isithethi sangaphandle kubonakala ngathi siyekile ukusebenza, sisezantsi kakhulu. Andifumani sisombululo, kuya kufuneka siyise evenkileni ukuze itshintshwe, emva koko iya konakala.
Ngamafutshane, iya kuba namandla ngakumbi, i-pk ekuqaleni yavakala ilunge kakhulu, kodwa kwiintsuku ezimbini yeka ukusebenza ...
Kwelinye icala, eyam, iphone4, isavakala ngathi lusuku lokuqala ...
Ngamafutshane, iya kuba namandla ngakumbi, i-pk ekuqaleni yavakala ilunge kakhulu, kodwa kwiintsuku ezimbini iyekile ukusebenza ...
Umbala we-colorware uyenza ngokwakho i-iPhone 4S yakho
UMovistar ubhengeza amaxabiso e-iPhone 4 ye-8Gb